Is the answers on this page actually the main 2022 NECO IGBO ANSWERS? No, This is 2020 NECO IGBO ANSWERS, to get 2022 NECO IGBO ANSWERS, you need to subscribe with us.
(a)ụdaume bụ mkpụrụ ụda asụsụ eji nkupụta ume a kpọpụta n'enweghi mgbochi n' oghere ọnụ. ebe mgbochiume bụ mkpụrụ ụda asụsụ a na enwe mgbọchi n'ikuku na mkpọpụta ha site na mmetụtọ ogan okwu na ibe ya.
Njiko bukwa oto time nkejdasysy e nwere n'Igbo o by njiko na-ejiko okwu any! na-ekwu mgbe any! na-asu Igbo.obu mkpuro okwu na-ejiko mkpurya susy ma obu okwie abyo maoby karia ony nasusu Igbo
Enweghịm ike ịdị ndụ na ewezuga ụbọ nna m. Mgbe ọ bụ nwa okorobịa, ọ na-anọkari n'ihu ezi anyị n'oge mgbede ma na-akpọ ụbọ a. Ndị mmadụ na-agbakwa egwu, na-akụ aka, mechikwaa anya ma na-ege ntị. Ekwentị ga-akụ ma ndị mmadụ agaghị etinye ya uche. Otu ụbọchị, ọ bụ nnem bu onye kwụsịrị ige ntị.
Anaara m ele anya na mkpịsị aka nnam mgbe ọ bụla ọ na-akpọ ụbọ a. Chai! ka ha si ada n'usoro ma dịkwa ụtọ. Ụmụnne m nwoke ndị nke tọrọ m achọghị imụta otu e si akpọ ụbọ a. Ma mụ onwe m chọrọ, ya mere nna m jiri kuziere m ihe niile gbasara otu e si akpọ ụbọ aka. Emechara, ọ bụrụzie ogologo mkpịsị aka m ka m jizi na-akpọ ụbọ a. Mkpịsị aka m na-akpọ ụbọ osisi karịa nke nnam. A mụtara ya nke ọma. Ọ doro m nnọọ anya.
(i) Ọjị ogbi - Ọjị gbara naanị otu
(ii) Ọjị dike - Ọjị gbara atọ
(iii) Ọjị ahịa - Ọjị gbara anọ
(iv) Ọjị ọmụmụ - Ọjị gbara ise, isii, asaa ma ọ bụ karịa.
(i) Ilu - Ilu bụ mmanụ okwu ndị Igbo jiri eri ji. Omumatu: A nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ.
(ii) Akpaalaokwu - Akpaalaokwu bụ okwu amamihe ndị maara ihe na-ewebata n'okwu oge ha achọghị ịkpọ ihe aha gbowam. Ọmụmaatụ: Afọ tara Emeka mmiri.
(iii) Myiri - Myiri na-egosi na mmadụ dịka mmadụ ibe ya na omume maọbụ na oyiyi. Ọmụmaatụ: Chike dịka nna ya.
(iv) Mbụrụ - Mbụrụ na-egosipụta ihe a na-ekwu maka ya, ka a na-asị na ọ bụ ihe a maọbụ onye a, iji gosi ka ihe abụọ ahụ si nwee otu ụdị omume. Ọmụmaatụ: Ebere bu edi.
(a) Akụbụzọ na-eme ede ruere nwanyị ọ chefuo onye kọrọ ya
(b) Akụbụzọ na-eme bụ e megbuchaa nwa ụkwụ ụbọchị ịgu e cheta ya
(ch) Akụbụzọ na-eme bụ ikwe buru nri ọ gbakụta ala azu
(a) Akụbụzọ anaghị achọ mmekọrịta ha na ndị nkụzi ya
(b) Akụbụzọ bụ hedimasta kara aka ma kajakwaa akaja
(ch) Akụbụzọ nwere ụtarị atọ ọ na eji abịa akwụkwọ.
Ikparita uka n'etiti Nkemakonam na Nnena maka ajo oria covid
Nkemakonam - eh! eh!! eh!!!
Nnenna - i saala chi?
Nkemakonam - Ee nwannem moni
Nnenna - Ole etu o si aga?
Nkemakonam - odi mma
Nnenna - kedu maka ndi be gi?
Nkemakonam - Ha di mma
Nnenna - I nukwara nke n'emenu?
Nkemakonam - O bu gini?
Nnenna - O bu oria nje Okuru uwa but covid 19
Nkemakonam - oria nkea odikwenu ebe?
Nnenna - O si n'obodo china
Nkemakonam - O lee I've mmadu ga emekwanu?
Nnenna - Anyi ga ezere inkosionu n'ogbako
Nkemakonam - Asikwa n'anyi ga ekechi imi na onu anyi
Nnenna - Anyi gana akwo aka anyi na mmiri na agbapu - agbapu
Nkemakonam - Emechila ahia obodo anyi
Nnenna - Emechikwara ulo uka anyi
Nkemakonam - Akwusikwala i'lu ozu mmadu
Nnenna - Anaghizikwa ebuga ozu na ulo nchekwa ozu obula
Nkemakonam - Biko na agbasakwa ozia
Nnenna - Agam ejisike mee otu a
Nkemakonam - ka odiba
Nnenna - O nwanne m